UAndrei Arshavin watshintsha umfazi wakhe osemthethweni emva komtshato
Umtshato ka-Andrei Arshavin no-Alisa Kazmina, ngenxa yokuba waphonsa umntwana wesithathu okhulelweyo uJulia Baranovskaya, kwenzeka ngoSeptemba 1 kunyaka odlulileyo. Kuya kubonakala, ukuhlala kwaye ujabule. Kodwa, kubonakala ngathi, i-boomerang yanquma ukubuyela ku-razluchnitse Alise Kazmina ngokukhawuleza ...
Imbali kaYulia Baranovskaya yatshitshisa ilizwe lonke. Kwi-studio yeAndrey Malakhov, umfazi oshiywe ngumhlali webhola elidumileyo lebhola ekhatywayo watsho ngokunyaniseka kwakhe. Isenzo sika-Arshavin, owayenqabile ukuhlawula abantwana bakhe abathathu, wayecaphukisa ababukeli abaninzi. Nangona kunjalo, ukungafuneki kakubi kungabangela ukuba uAlisa Kazmina, owathatha umdlalo wezemidlalo kwiintsapho.
Ngethuba leengxubusho ezivuthayo zonxantathu u-Arshavin, uKazmino kunye neBaranovskaya, igama elithi "boomerang" lisoloko lizwakala. Kodwa, mhlawumbi, akukho mntu ulindelwe ukuba i-razluchnitsa iya kufuneka iphile ngokutshutshiswa kweqabane elitsha kwiinyanga ezimbalwa emva komtshato.
UAlisa Kazmina waxolela uxolo lukaAndrei Arshavin
Kwizithombe zomtshato zika-Arshavin noKazmina, abatsha abasandulana nabo babonakala benovuyo: kubonakala ngathi le mini bobabili zibaluleke kakhulu ebomini babo. Umfazi okhulelweyo ubheka umyeni wakhe omncinci ngokumdumisa, kwaye uyamemelela ngokuvuya.
Kwaye kwangoku nje kwathiwa ngaphambi nje komtshato wakhe, u-Andrei Arshavin waqala enye inveli kwinqanaba.
Ngokungcatshwa komyeni wakhe u-Alice Arshavin (uKazmina) bafumene emva kokuba intombi yabo efana no-Yesenya yazalwa. Lo mfazi wayethunyiswa ngokwenene xa efumana ikhwelo evela kumlingane wentombazana egama linguCatherine, u-Arshavin adibana naye kunyaka odlulileyo. Ngokwamadoda, uCatherine ngokwakhe wavuma kuye ngokukrexeza ngenye yeengxabano. Esi sibini sasisecaleni lomtshato, kodwa umyeni wakhe wanquma ukugcina intsapho kwaye umxolele umfazi. Kwaye kwenzeka ukuba uCatherine, odibene nomdlali webhola lebhola ngo-2015, wayefumana rhoqo izipho ezibizayo ze-Arshavin kwaye wayeceba ukutshata naye, nangona wayesebudlelwane. Ukuthetha ngeendaba zakamuva malunga nokungcatsha komyeni wakhe, u-Alisa Arshavina wabika ukuba wayexolela umlingane onothando. Ngokomfazi webhola lomdlali webhola, wakhala xa efunda ukuba indoda yendoda yangaphambili yayitshele uAlice yonke into:
Andiqondi isizathu sokuba le ndoda ibonakale ebomini bethu kwiminyaka emibini kamva. Ulwalamano lwethu noAndreya emva komtshato kwaye ukuzalwa kwintombi yam kungcono. Utshintshile, wahluke ngokupheleleyo: ukunyamekela, ukunakekela, ukuzama kakhulu. Ndakhala xa uSasha ebonakala, akazange aqonde indlela umntu angenza ngayo oku - ukutshabalalisa intsapho.
U-Alisa Kazmina akayi kuqhawula u-Andrei Arshavin, ekholelwa ukuba ukunyeliswa kwakhe kuye kwadlulileyo. Siyabona kwiZen le ngcaciso 👍 kwaye sihlala siyazi zonke iinjongo kunye neentlanzi zezoshishino.
Ukuphahlazeka kwe-Air kunye neParis Hilton: ixhoba okanye umdlali?
USergey Bezrukov waziqhayisa ngokuphumelela kokuqala kwentombi yakhe, ividiyo
U-Anna Kournikova wayekrokrelwa nge-anorexia, ividiyo
UNatalia Krachkovskaya wasweleka esibhedlele saseMoscow
U-Ksenia Sobchak ubeke amazwana kwizinga elingaphantsi komntwana wakhe ozayo
I-solo-soloist yeqela elithi "VIA-Gra" U-Nadezhda Granovskaya waba yinto engavumelekanga
Kutheni kufuneka iinyawo zihlale zifudumele?
Umntwana kwintlobo ebanjwe yi-arachnid
Amabhasi kunye nesinamoni kunye namantongomane
Izindlela ezili-10 zokutshintsha ubomi ukuze kube ngcono
U-Olga Buzova unqatshelwe imbuyekezo kunye no-Andrei Arshavin, ividiyo
Isaladi ngeengxube kunye neelnuts
Iphunga elimnandi nelomuncu lomsila
Ungayichazela njani imeko yemozulu kwintsapho?